Ukukhula Kwensizakalo Yekhasimende Lomphakathi | Martech Zone
Lapho sibonisana nezinkampani ezinkulu ezifisa ukuthatha ukungena ezinkundleni zokuxhumana, uchungechunge lokuqala lwemibuzo esiyibuzayo lumayelana nengqalasizinda yezinsizakalo zamakhasimende abo. Ngenkathi amaqembu wokukhangisa ebheke ezinkundleni zokuxhumana ukukhulisa imiyalezo yabo ku-inthanethi, amakhasimende alezi zinkampani alindele ukuthi kuyindlela entsha lapho efuna impendulo khona.
Kusukela I-Bluewolf: Izinkampani ezicabanga phambili zitshala imali kumathuluzi angahlomisi ama-ejenti awo kuphela, kepha bonke abasebenzi bawo, ngokuncintisana. Finyelela izinsizakusebenza ezinemininingwane yokuthi uthuthela kanjani etafuleni lakho lensizakalo uye efwini, futhi uliqondanise nesiko eligxile kumakhasimende, kungakusiza ukuncintisana futhi unqobe.
Nayi i-infographic enhle evela eBluewolf enikeza ukuqonda ekukhuleni kwemboni yamakhasimende ezenhlalo:
Nakhu ukubuka konke ukuthi iBluewolf ingasiza kanjani ibhizinisi lakho:
Qiniseka ukulanda I-Bluewolf's Social Service Success Kit!
Tags: bluwolfInsizakalo yekhasimendeinfographicinsizakalo yamakhasimende omphakathi
Ukwanda Kwezentengiso Okungenayo